निरन्तरको वर्षाले नेपालगन्ज क्षेत्र फेरी जलमग्न, जनजीवन प्रभावित – Etajakhabar
निरन्तरको वर्षाले नेपालगन्ज क्षेत्र फेरी जलमग्न, जनजीवन प्रभावित
नेपालगन्ज १६ भदौ । हिजो साँझदेखिको निरन्तरको वर्षाले नेपालगन्ज क्षेत्र जलमग्न भएको छ । नेपालगन्जका घरबारिटोल, धम्बोझी, न्युरोड, बेलासपुर लगायत नगरका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न भएका हुन । डुबानका कारणका घरबारि टोलका पसलहरुमा पानी पसेको छ ।
नेपालगन्जको वडा नं. १ धम्बोझी रेडियो सद्भाव अगाडिको गल्लीमा विगत १ महिनादेखि पानी जमिराखेको थियो । जमेको पानी ओभाउन नपाउँदै हिजो देखिको वर्षाले सडक पुनः जलमग्न भएको छ भने केहि घरहरुमा समेत पानी पसेको छ । जनप्रतिनिधी आएपछि डुबान नहोला भन्ने आशा गरेका स्थानियहरु यसवर्ष पनि डुबान ब्यहोर्नुपरेपछि निराश बनेका छन् ।
वडा नं. १ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले उक्त सडकको नाला मुख्य नालासँग नजोडिएको हुँदा तत्काल निकास दिन नसकिएको बताउनुभयो । यस्तै, वडा नं. १२ को बेलासपुर जाने मुख्य सडक पनि जलमग्न हुँदा स्थानियहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ ।
मुख्य नालाको पानी बेलासपुर तर्फ प्रवेश गरेपछि सडक जलमग्न बनेको हो । १२ का वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदिले पनि मुख्य नाला र सहायक नालाको उचाई फरक भएका कारण निकासमा समस्या आएको बताउनुभयो । अध्यक्षद्धयले आगामी बजेटमा नला व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना आउन लागेको जानकारी दिँदै आगामी वर्षबाट डुबान ब्यहोर्नु नपर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १६, २०७४ समय: १०:५४:४५